राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी - News Madhesh
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी
जनकपुरधाम, २४ भाद्र । जनकपुरस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका कोर्ष कन्ट्रायक्टका शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले करार नियुक्तिको माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
करिब महिना दिनदेखि शान्तिपूर्ण तरिकाले विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुको माग पुरा नभएपछि बुधवार विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । तर उपकुलपति प्रा. भरत झाले प्रहरी बोलाएर विहिबार ताला फोड्न लगाएपछि विश्वविद्यालयमा अवस्था केही बेर अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो ।
विगत १७ दिनदेखि आन्दोलित उनीहरुले पहलो चरणमा हातमा कालोपट्टी बाँधी अध्यापन गरेका थिए भने दोस्रो चरणमा उनीहरुले लगतार १५ दिनसम्म विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा रजिष्ट्रारको कार्यालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका थिए ।
आन्दोलित कोर्ष कन्ट्रयाक्टका शिक्षकहरुले उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुनः तालाबन्दी गरेपछि विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. झा उनीहरुसँग वार्ता गर्न तयार भएका छन् ।
माग पुरा नभएसम्म तालाबन्दी जारी राख्ने चेतावनी दिएपछि उपकुलपति झाले बाध्य भएर छलफलका लागि बोलाएको कोर्ष कन्ट्रायक्ट शिक्षक संघका सभापति दिलिप कुमार यादवले जानकारी दिए । माग पुरा गर्ने÷नगर्ने कुरा अब छलफलपछि मात्र बताउने उनको भनाई छ ।
विश्वविद्यालयमा अहिले ३२ जना कोर्ष कन्ट्रायक्ट शिक्षक कार्यरत छन् । स्थापना कालदेखि नै आफूहरु विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहेपनि करारमा नियुक्त गर्न आनाकानी गरिरहेको आन्दोलित कन्ट्रायक्ट शिक्षकहरुको गुनासो छ ।